ग्रीष्मकालीन शिविर को बारे मा सुझाव र चेतावनी 🏕️ - Ne gerekir?
ग्रीष्मकालीन शिविर बारे सुझाव र चेतावनी
गर्मी शिविरका लागि कस्ता सामग्री आवश्यक छ? शिविर उपकरण सिफारिसहरू
जब यो क्याम्पिंग को लागी आउँछ, सबै तनाव माथि लाइन! त्यसो भए शिविरका लागि के आवश्यकताहरू छन्? उसले शिविरका सामानहरू कसरी किन्नुपर्दछ, उसले कहाँ किन्नुपर्दछ र कुन अवस्थामा उसले आफूसँगै लैजान सक्छ? हामीले यो लेख शिविरबिना लेखेका थिएनौं! चिन्ता नलिनुहोस्, हामी तपाईंलाई अरू सबै कुरा भन्छौं तर ... त्यसो हो भने सुरु गर्नुहोस्।
नराम्रो ऊर्जाबाट छुटकारा पाउँदै
आत्मविश्वास प्राप्त गर्दै
आफैलाई पत्ता लगाउनुहोस्
गडबडबाट टाढा हुँदै
यात्रा गर्न मन नपरेकाहरूले शिविरमा प्रयास गरे पछि फेरि हार दिन सक्दैनन्। वास्तवमा, जुन आशा गरिन्छ यसको विपरीत, यो छुट्टीको गैर-खतरनाक प्रकार हो। टर्कीमा क्याम्प गर्नु वास्तवमै राम्रो छ। किनकि क्याम्पिंग गतिविधि गर्ने व्यक्तिहरू ती मानिसहरू हुन् जो हामी जस्तो तनावबाट टाढा जान चाहन्छन्। तिनीहरू प्रकृतिका अधिक व्यक्ति हुन् र नवीनताका लागि खुला छन्।
र यदि हामी आतिथ्य, सहयोग, र टर्की संस्कृति को संरक्षण को लागी जोड्छौं, यो पिटाउन सकिन्न। तपाईं समुद्रमा जानुहुन्छ र आफ्नो छिमेकीको पालमा हेर्नुहुन्छ। तपाईं फर्कनुहोस्, उनीहरूले कफि तयार पारेका छन्। साँझमा, सामूहिक सम्झौता गरिन्छ, खाना सँगै पकाइन्छ। क्याम्पिंग भनेको साझेदारी गर्नको लागि ठाउँ हो। यो विशेष हो ... के बिना पास गर्न सकिदैन जुन यसको मौसम हो। गर्मी, जाडो र वसन्त अलग छन्।
त्यहाँ हामीलाइ डर छ कि यसले तपाईंलाई दु: ख दिनेछ। त्यहाँ तत्वहरू छन् जुन मौसम अनुसार आवश्यक हुन्छ। यी सामग्रीहरू केहि वास्तवमै उच्च गुणवत्ताको हुनुपर्दछ। हाम्रो अनुसन्धान र अनुभव अनुरूप, हामी निम्न भन्न चाहन्छौं;
गर्मी शिविर चेकलिस्ट आपूर्ति गर्दछ
क्याम्पि mat मैट
क्याम्पि chair कुर्सी
प्राथमिक उपचार र केयर किट
क्याम्पि st स्टोभ
क्याम्पि te टिपाट
क्याम्पि bag ब्याग
पौंडी पोशाक / बिकिनी
गर्मी शिविरका लागि आवश्यक सामग्रीहरूमा सुझावहरू
अर्पेनाज ताजा र कालो पाल
(२.2.6 किलो) डेकाथ्लन
यो सूर्य र वाटरप्रूफ तम्बू तपाईं तातो गर्मी को दिन को लागी सबै भन्दा राम्रो छ! ठूलो ताजा र कालो पालहरूको लागि यहाँ क्लिक गर्नुहोस्.
(खाली 480० GR, क्षमता २० L) डेकाथ्लन
यो इन्सुलेटेड ब्याग, जसले हाम्रो परीक्षण पछि गम्भीर भिन्नता ल्याउँदछ, तपाईंको लागि ठूलो प्रयोगको हुनेछ।
यदि तपाइँ शिविरमा ड्राईभ गर्दै हुनुहुन्न भने, खानेकुरा र पेय पदार्थको साथ तपाईको झोला भर नगर्नुहोस्। यसको सट्टामा, तपाईं आफ्ना अन्य सामानहरू राख्न सक्नुहुनेछ र सामान्य झोलाको रूपमा प्रयोग गर्न सक्नुहुनेछ। तपाईंको पालमा वस्तुहरू राख्नु भएपछि, तपाईं जहाँ जानुहुन्छ, त्यहाँबाट तपाईंको खाना र पेय पदार्थहरू ल्याउनु बढी तार्किक हुनेछ।
अवश्य पनि यो तपाइँ कहाँ जान्छ र कसरी जान्छ भन्नेमा निर्भर गर्दछ। निर्णय तपाइँको हो!
(खाली १.1.7 किलोग्राम, क्षमता L१ L) डेकाथ्लन
किनकि यो झोला liters१ लिटर हो, पक्कै पनि तपाईंले त्यसमा 71१ लिटर वस्तुहरू राख्नु हुँदैन। सम्पूर्ण भारी सामानहरू एक झोलामा जम्मा गर्नु स्वास्थ्यको लागि ठूलो गल्ती हो। हामीले यहाँ देख्ने उद्देश्य भनेको तपाईंको लामो चीजहरू बोक्नु हो जस्तै पछाडि तपाईंको पाल। यस झोला, जुन निश्चित रूपमा काठ को समर्थन मा १० नम्बर हो, झटका प्रतिरोध छ। त्यहाँ तपाईले चाहानु भएको धेरै पकेटहरू छन्। ? हामी धेरै खुसी छौं!
(२१० GR) डेकाथ्लन
यो म्याटको सबैभन्दा आधारभूत हो। यद्यपि यो सान्त्वनाका लागि सिफारिश गरिएको छैन, यो हल्का र उपयोगी छ। भुइँमा चिसोबाट कटौती। यो डुब्न रोक्छ। तर यदि तपाइँ आरामदायी छुट्टी चाहानुहुन्छ भने, पढ्नुहोस्। यो पालका साथ उपयुक्त छ।
स्वचालित inflatable चटाई
(२.1.1 किलो) डेकाथ्लन
यो चटाई, जुन अधिक सहज र मध्यम तौलको हुन्छ, अनायास फुल्छ। तपाईंले पूर्ण सूजनको लागि अन्तिम सासहरू दिन आवश्यक छ। तर तपाईले पम्प जस्तो उपकरण बोक्नुपर्दैन। यो प्रमाणित टिकाऊपनको साथ एक चटाई हो। यो पालका साथ उपयुक्त छ।
(२.2.8 किलो) डेकाथ्लन
जो म भन्छु म सान्त्वना बिना गर्न सक्दिन, म यो मेरो पीठमा बोक्न सक्दछ यदि आवश्यक छ भने, तर म त्यस्तो सुत्न चाहन्छु! यो हामीले प्रयोग गर्ने क्याम्पिंग म्याट हो। यसको झोलालाई हाम्रो झोलामा बराबर गर्न हामी अनावश्यक चीजहरू हामीसँग लिदैनौं। हामीले यो ओछ्यान दुई व्यक्तिको लागि किनेका छौं। तर अब उसको एक मात्र व्यक्तित्व छ। यो हाम्रो सिफारिश हो। यदि तपाईं चाहनुहुन्छ भने तपाईं अन्य ओछ्यानहरूको लागि पनि हेर्न सक्नुहुन्छ। यो सहनशीलता परीक्षण पारित गरेको छ। तपाइँ तपाइँको पालको अनुकूलता जाँच गर्न सक्नुहुन्छ। ठूला पलंगहरूको लागि यहाँ क्लिक गर्नुहोस्.
(Gr० GR) n50
हामीले डेकाथ्लनबाट यो धेरै प्रकाश पम्प खरीद्यौं। हाल तिनीहरूको साइटमा उपलब्ध छैन। हामी फरक साइट सुझाव दिन चाहँदैनौं, केवल ताकि शिपिंग शुल्क अलग तिर्ने छैन।
पम्पको मोडेल हामी सिफारिस गर्दछौं: एयर हथौड़ा १२ ″ / cm० सेमी सेमी मुद्रा स्फीति बेस्टवे
फोल्डेबल पिकनिक मट
यदि तपाईं कुर्सीको भार सहन सक्नुहुन्न, यदि मूल्यले चोट पुर्‍यायो भने, र अन्तमा, यदि तपाईं भुइँमा बस्न मनपराउनुहुन्छ भने, यो उत्तम हो, तर उत्तम पिकनिक कम्बल! फोहोरले फोहोर स collect्कलन गर्दैन, यो वाटरप्रूफ हो, यो फोल्ड हुन्छ र सानो हुन्छ। यो लगाउने प्रतिरोध परीक्षण पारित गरेको छ।
जब म हाम्रो कुकुरलाई ड्राइभ गर्दछु, म यसलाई कारको मुनि राख्छु। कारण यो हो कि यसले कहिले पनि कुनै लिन्ट वा धुलो हुँदैन। एक चोटि उसले हल्लालाई हेर्छ।
फोल्डेबल क्याम्पिंग टेबल
(२.1.6 किलो) डेकाथ्लन
यो टेबल, जहाँ तपाईं ठूलाहरू किन्न सक्नुहुन्छ, मानिसहरूलाई शिविर बनाउँदछ र पिकनिक लिन्छ केवल यसको मिठासको कारण। यो अत्यन्त टिकाऊ तालिका फोल्ड हुँदा ल्यापटप झोलाको आकार हुन्छ। यसले तपाईंको रमाईलोमा आनन्द दिन्छ। तपाईंले ग्यालरीमा छविहरूको सिफारिश तालिकाको मूल्य र विस्तृत जानकारी फेला पार्न सक्नुहुनेछ।
सानो टेबलको लागि यहाँ क्लिक गर्नुहोस्.
२/2 व्यक्तिको लागि टेबलको लागि यहाँ क्लिक गर्नुहोस्.
२/4 व्यक्तिको लागि टेबलको लागि यहाँ क्लिक गर्नुहोस्.
फोल्डेबल क्याम्पिंग स्टूल
(२.1 किलो) डेकाथ्लन
यो कुर्सी, जुन धेरै सहज छैन तर राम्रो मूल्य र वजन छ, उपयोगी हुन सक्छ।
तपाईं यहाँ मल र कुर्सीहरू हेर्न सक्नुहुन्छ, यहाँ क्लिक गर्नुहोस्।
तह शिविर कुर्सी
एक कप होल्डरको साथ यो कुर्सी वास्तवमा सबै अन्य मूल्यहरूको तुलनामा राम्रो मूल्य हो। कडा र आरामदायक।
चलिरहेका जुत्ताहरू / खेलकुदका जुत्ताहरू
यो हामीले किनेको जुत्ता हो जुन यो मूल्य प्रदर्शन उत्पादन हो। हामी अझै यसलाई प्रयोग गर्दछौं। तपाईं यसको लचिलोपन र आरामबाट आश्चर्यचकित हुनुहुनेछ। यस उत्पादनको साथ एथलेटिक्स मोजार हामी सोच्छौं कि ती दुईहरू एक साथ उत्कृष्ट टीम हो। त्यहाँ पसिना पनी पनी पनी पनी पसिना आउँदैन, पनी पसिना आउँदैन।
एकमात्र दोष यो हो कि यो तत्काल फोहर हुन सक्छ। तर यो टाढा जान्छ जब सफा र सफा जुत्ता क्लियर स्प्रे द्वारा।
Inox स्टेनलेस फायरबक्स
(Gr०० GR) नुरगाज
के तपाईं धेरै हावाको साथ ठाउँमा जाँदै हुनुहुन्छ? यो एउटा बाकस हो जसले हावालाई रोक्छ र माटोको लागि फाइदाजनक हुन्छ (कोइला भुइँमा रहँदैन)। टुक्रा टुक्रा गरेर, यो एक सानो झोलामा फिट हुन्छ जुन भेला हुन्छ र उत्पादको साथ फिर्ता पठाइन्छ।
सानो भाँडो प्यान + Ilgaz कुकर सेट
सॉस प्यान्स, जुन २ व्यक्तिको भाँडाका लागि एकदम उपयुक्त हुन्छ, कुकर सेट समावेश गर्दछ र उत्पादनमा आउने आवरणमा जान्छ। यसले थोरै ठाउँ लिन्छ र भारी हुँदैन। यसको ह्यान्डलहरू धेरै बलियो र आगो प्रतिरोधी छन्। यो डिशवाशरमा धुउन सकिन्छ।
यस सेटमा फायरबक्स विशेष छ; वायुप्रूफ र सेल्फ लाइटर सेटमा कार्ट्रिज २230० ग्राम छ। जब तपाई नयाँ कार्ट्रिज किन्न चाहानुहुन्छ यहाँ यहाँ क्लिक गर्नुहोस्। क्याम्पिंग किचन आपूर्तिको लागि यहाँ क्लिक गर्नुहोस्.
अवश्य पनि, तपाई यस प्रकारको टीपोट तपाईको शहरको बजारमा सस्तो मुल्यहरुमा पाउन सक्नुहुन्छ। तर यदि हामी इन्टरनेटबाट भन्छौं भने हामी सिफारिस गर्दछौं। शिविरमा चिया प्रश्नको परे, यसको महत्त्व हो। तपाईंले ग्यालरीमा छविहरूको मूल्य र उत्पादनको विस्तृत जानकारी फेला पार्न सक्नुहुनेछ।
जब हामी हाम्रा शब्दहरूको अन्तमा आउँछौं, हामी तपाईंलाई यो भन्न चाहन्छौं। मोल्डबाट छुटकारा पाउँदै! केवल तपाईंले शिविर बनाउनुभएको कारणले तपाईंले शिविर नियमहरू पालना गर्नु पर्दैन। त्यसोभए तपाईं शिविर हुनुहुन्न किनभने तपाईंले एक inflatable गद्दा लिनुभयो। कसैको टिप्पणीको ख्याल नगर्नुहोस्। यदि महत्त्वपूर्ण कुरा तपाईंको गतिविधिबाट राम्रो प्रतिक्रिया प्राप्त गर्न हो भने, तपाईंको मोल्डहरू हटाउनुहोस्!